माओवादी केन्द्रको बैठक बस्दै ! आजै मन्त्रीको टुंगो लगाइने - नेपाल कुरा
माओवादी केन्द्रको बैठक बस्दै ! आजै मन्त्रीको टुंगो लगाइने
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को स्थायी समिति बैठकको आज बस्दै छ । बुधबार दिउँसो २ बजे पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा हुने बैठकमा सरकारमा मन्त्रीका रुपमा पठाइने नेताहरुका बारेमा छलफल र निर्णय हुने बताइएको छ ।
सरकारमा सहभागी हुन आकांक्षीहरुको माओवादी केन्द्रमा शीर्ष नेताका घरमा ‘डेलिगेसन’ धाउन थालेपछि नेताहरुले बैठक बसेरै यस बिषयलाई टुङ्ग्याउन लागेका हुन् । माओवादीले सरकारमा नयाँ अनुहारलाई पठाउने स्पष्ट अनौपचारिक घोषणा गरेपनि बैठकको माध्ययमबाटै औपचारिक निर्णय गराउन खोजेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउबाले आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्ताको तयारी गरेका छन् । दलहरुका बीचमा भागबन्डानमिलेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या पैदा भएको छ ।
काँग्रेस विपक्षीकै भूमिकामा बस्छः नेता सिंह
नेपाली काँग्रेसका क्षेत्रीय सचिवको निधन
नयाँ सरकार गठनबारे छलफल गर्न कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्दै